उग्रचण्डी भगवती रोएकै हुन् त ?
काठमाडौं । केही महिनाअघि दोलखा भीमसेनलाई पसिना आयो, क्षमापूजा गर्ने कार्य गरिएको थियो । हुन त मानव सभ्यता बच्ला कि नबच्ला भन्ने द्विविधा भइरहेको बेलामा कोरोना भाइरसले सनसनी फैलाइरहेकै छ । यसैवीच नालास्थित उग्रचण्डी भगवतीलाई पसिना आएको, महिला रोएको आवाज सुनिएकोले क्षमापूजा गर्ने कार्य भइरहेको छ । राज्यले पनि क्षमापूजा गर्ने अनुमान छ ।
गतहप्ता बुधवार बिहान भगवतीको शिलामा पसिना आएको र त्यसअघि महिला रोएको आवाज सुनिएकोले भगवती रुन थालेको विश्वास गर्न थालेका छन् भक्तजनहरु । पुजारी शिद्धिबहादुर कर्माचार्यले नै भगवतीको मूर्तीमा पसिना आएको बताएका छन् । स्थानीय नागरिकहरु महिला रोएको सुनेको बताइरहेका छन् । यो चर्चाले यतिबेला देशव्यापी रुपमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
देवदेवीहरुलाई पसिना आउने घटना बेला बेलामा घट्छन् र यस्तो बेलामा अनिष्ट हुन्छ भनिन्छ । पुजारीले मात्र क्षमापूजा गरेर पुग्दैन, राज्यले गर्नुपर्छ, पहिले पहिले राजाहरुले गर्ने प्रचलन थियो । अहिले पनि पूर्वराजाले क्षमापूजा पठाउँदा देश र जनताको कल्याणकारी कार्य नै हुनेथियो ।
२०७१ सालमा भगवतीलाई पसिना आयो, पछि भूकम्प गएको थियो । पुजारीका अनुसार १ सय ९४ वर्षअघि भगवतीको मन्दिरमा रगत नै बगेको थियो ।
सवाल आस्था र विश्वासको हो । कहिले कहिले गणेशले दुध पिएका घटना पनि भएका छन् । मच्छेन्द्रनाथको रथ तीन टुक्रा भएर भाँचिएपछि दरवार हत्याकाण्ड नै मच्चिएका घटना पनि हामीले भोगेका छौं । देवदेवीको पूजा, क्षमा पूजा गरेर अनिष्ट टर्छ भने पूजाआजामा किन कञ्जुसी गर्ने ? यतिबेला हिन्दुधर्म मान्नेहरु उग्रचडी भगवतीको पूजा गर्नुपर्ने माँग गरिरहेका छन् ।